Iza no mitantana izao tontolo izao?
Nohajambain’ny andriamanitr’izao tontolo izao … ny sain’ny tsy mino, mba tsy hiposahan’ny fahazavan’ny filazantsaran’ny voninahitr’i Kristy, Izay endrik’Andriamanitra." 2 Korintiana 4:4
"Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an’i Satana faingana eo ambanin’ny tongotrareo." Romana 16:20
Rehefa tsy misy zavatra mandeha amin’ny laoniny, dia kinga erỳ ny olona hanondro ny tompon’andraikitra: Andriamanitra! Fa iza moa no mitantana izao tontolo izao ankehitriny? Ny devoly, hoy ny Baiboly; izy no ilay “andriamanitr’izao tontolo izao”. Nanomboka tamin’ny nihainoan’i Adama ny feon’ilay mpaka fanahy, dia voaroaka niala tao am-paradisa ny olona, ka miaina ao anaty tontolo anjakan’i Satana, ilay “mpanapaka ny fanjakana eny amin’ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny” (Efesiana 2:2). Antsoin’i Jesosy hoe “andrianan’izao tontolo izao” i Satana (Jaona 12:31; 16:11). Na izany aza, Satana dia tsy afaka mihoatra ny fetra napetrak’Andriamanitra.
Fa Jesosy Kristy kosa, Ilay Zanak’Andriamanitra, dia nandresy tanteraka ny devoly, tamin’ny nahafatesany teo amin’ny hazofijaliana sy ny nitsanganany tamin’ny maty (Hebreo 2:14). Kanefa ankehitriny ny devoly dia mbola tsy nofehezina tanteraka. Rehefa tonga hanjaka ny Tompo vao hafatotra i Satana ary hosakanana tsy hiasa mandritra ny arivo taona, alohan’ny hanipazana azy any amin’ny “farihy afo sy solifara” (Apokalypsy 20:10). Fantatry ny devoly fa efa resy izy, ary fantany koa ny hiafarany. Mandra-piandry izany izy dia mampiasa ny “fanahy ratsy” rehetra (Efesiana 6:12) mba hanimbany ny zanak’olombelona sy hanakanany ny kristiana tsy hijoro ho vavolombelona, raha azo atao.
Koa aoka àry tsy hohadinoina, na oviana na oviana, fa fahavalo efa resy no mifanandrina amintsika. Na izany aza anefa, aoka haharitra amin’ny fivavahana, satria ny Tenin’Andriamanitra dia mampitandrina antsika hoe: “Miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany” (1 Petera 5:8). Aoka tsy hohadinoina ihany koa fa mety hanandrana hamitaka antsika izy, amin’ny fiovany endrika ho tahaka ny “anjelin’ny mazava” (2 Korintiana 11:14).